“Hantidda Ummadda Waa La Badbaadinayaa, Cirro-na Maanta Inuu Madaxweyne U Qalmo Ayuu Muujiyay” Xildhibaan Axmed Yaasiin |
“Hantidda Ummadda Waa La Badbaadinayaa, Cirro-na Maanta Inuu Madaxweyne U Qalmo Ayuu Muujiyay” Xildhibaan Axmed Yaasiin
Hargaysa(GNN):-Xildhibaan Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle oo ka mid ah Mudanayaasha Golaha Wakiillada Somaliland, ayaa Guddoomiye ku-xigeenka 1aad ee golahaasi ku eeddeeyay inuu Sharciyada iyo Xeer-hoosaadka ku tuntay, waxaannu sheegay inaanay aqbali doonin boob uu tilmaamay inay Xukuumaddu ku hayso hantidda ka dhaxaysa Shacbiga Somaliland.
Xildhibaan Axmed Yaasiin oo warbaahinta la hadlay gacan ka hadalkii dhex-maray Guddoomiye Cirro iyo ku xigeenkiisa ka dib, waxa uu yidhi
“Maanta waxa uu Baashe Maxamed Faarax (Guddoomiye ku xigeenka koowaad ee Golaha Wakiillada), halkaa ka sameeyay, Ummaddi waxay sharci ku tahay kala dambayn weeyaan. Wuxuu ku tuntay sharcigii waxaanu ognahay waxa la sameeyay,
waxa la boobayaa waa Xoolihii Ummadda ee laga qabtay gacantii gacantii ganacsiga gaarka loo leeyahay (Privet), ee ay ku faanayeen inta haamood ee hagaagay,ee ay ku faanayeen sida ay u hagaajiyeen inay maanta dib u baabinayaan baanu u aragnaa, hana yeeli mayno.” Ayuu yidhi Xildhibaan Axmed Yaasiin Sheekh Ayaanle
Waxaanu Xildhibaanku intaas ku daray “Hantidda Ummadda waa la badbaadinataa, Guddoomiye Cirrona maantuu muujiyay inuu Madaxweyne u qalmo.” Ayuu Xildhibaan Axmed Yaasiin.